ကျော်ခ| June 8, 2012 | Hits:23,140
46 Responses LeaveaReply Cancel reply
မင်းမင်း June 8, 2012 - 9:00 pm မွတ်စလင်တွေ ရန်ကိုရန်နဲ့ တုတ်ပြန်ရင် ပြဿနာပိုကြီးသွားမယ် မြန်မာနိုင်ငံဟာ
Reply Mr Green June 10, 2012 - 10:55 am Yes of course , Burmese organisation are not invone the muslin people . We must show in the world.
Reply ko June 8, 2012 - 11:20 pm ယ္ခင်က၊ကျွန်ုပ်Parkistanတစ်ဦးနှင့်အတူတူ ပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရာသူတို့နိုင်ငံမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်စဉ်ကလူတ
Reply monmalay June 9, 2012 - 5:00 pm U stupid lar ko,Just for this affair u want mill arty again.
Reply sandar June 8, 2012 - 11:31 pm အမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေ
Reply kyaw soe win June 9, 2012 - 12:02 am ရခိုင်တွေဟာကိုယ်မြေမှာနေတာတောင် လူမျိုးခြားတွေကိုကြောက်နေရတဲဘ၀ရောက်နေရတာ
Reply Bo Min Aung June 9, 2012 - 12:08 am We condemn strongly such revenge for the recent incident. Islam should stop such behavior right now. We have to protect both innocent Rakhine and Muslims. What are the Muslims leaders doing? I urged them already to stop.
Reply ဖိုးတက် June 9, 2012 - 12:34 am အမျိုးကောင်းသားတွေပီသစွာ ၈၈မျိုးဆက်တွေ သတင်းထုတ်ပြန်မှုလုပ်တယ်။ကျနော်တို့တပ်ဦးခေါင်းဆောင်
Reply Ko Ko June 9, 2012 - 10:52 amိ်ဟေ့လူ ဒါ Government နဲ့ ဆိုင် တာ ။ NLD က အစိုးရ မှ မဟုတ် တာ ။ မစဉ်းစားပဲ ရမ်းမနေနဲ့ 
Reply yehtutlwin June 9, 2012 - 7:31 pm NLD က Government မှ မဟုတ် တာ
Reply Raymond Zaw Lynn June 9, 2012 - 12:35 am How come over 96 Percentage are muslim in on that area? Government need to set up Population policy on that place to break down that too many muslim……… otherwise next5years Democracy country become.. they will try to propose New Muslim Country on that Yakhine Area…..
Reply koko June 9, 2012 - 12:36 am if we would kill all of them , what we would get back from this ? you must find it out who are they? what are they? , what they want to be? and why they have done? we could kill of them and what would be happened next? Just think about it. That is including religion and nation.
Reply jj96 June 9, 2012 - 1:30 am မဖြစ်သင့်ဘူးနော် အတူတူနေနေကြတာ၊၊၊ဘာသာရေးနွယ်လာရင်တအားရှုပ်ကုန်မယ်၊၊ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုသာအပြစ်ပေးသင့်တယ်၊၊၊
Reply thihamin June 9, 2012 - 2:12 am အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာသာရေးအရ ဘာမှမဆွေးနွေးလိုပါဘူး။ သို့သော် သူတို့အားလုံး(အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်း) သိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ဘာလည်းဆိုတာကို။ ဒါကြောင့် ရှေးဆိုရိုးစကားကိုဆိုပါရစေ။ ကုလား(ကူးလာ)နဲ့ ငါးမြေပေါ်မှာအရုပ်ရေးပြရလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုမရောက်စေလိုပါဘူး။
Reply ngwe thoung June 9, 2012 - 12:46 pm ရခိုင်တိုင်း၇င်းသားတွေ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် အမိမြေကို ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ
Reply myat June 9, 2012 - 8:54 am ခုလို မဆိုင်တဲ့ လူတွေကို သတ်တာ မျိုးကတော့ ဘယ်ဘက်ကိုမှ လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး
Reply Mac June 9, 2012 - 9:40 am ကိုယ့်အိမ်ခြံထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်းနေရင်းနှင့် အပြင်ကခွေးဝင်ကိုက်တာလောက် နာတဲ့ဒဏ်ရာလောကမှာမရှိဘူးထင်တယ်။ သူ့ အရိပ်ကိုခေါ်ပြီး သူ့ အခက်ကိုချိုးလာရင်တော့ ဘယ်သူမှသည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြသနာဒီထက်ပိုကြီးလာရင် ဒါဟာရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ မင်းမဲ့လုပ်ရပ်သက်သက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းနာလည်တမယ်ထင်တယ်။ အခု အချိန်မှာ မူဆလင်လူ မျိုးခေါင်းဆောင်တွေ က လည်း ကြေငြာချက် ချည်းပဲသက်သက် ထုန်ပြန်နေလို့မပြီးလောက်ဘူးထင်တယ်။ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အားလုံးကို ၀န်ချတောင်းပန်သင့်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ကိတ်စတွေအတွက် အခြေအနေတမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ သို့ မဟုတ်ရင်တော့——။
Reply အာရုံ June 9, 2012 - 9:45 am ရခိုင်ပြည်ကဗမာရခိုင်ဦးနှာက်သေးစွာနဲ့လက်တုန့်ပြန်မှုက
Reply AZ Daddy June 9, 2012 - 10:03 am If 96 % of definitive area is Islam, that means. …..administration of country is weak. Immigration department and human resources have to administer that any area near border should not be dominant by religion in Myanmar. That is because of all ‘ corrupt’ in Immigration Department in the past. The government have to haveapolicy not to get dominated by other religion/race in particular area. Needs ‘ administration skills ‘ in country.
Reply ဗမာ June 9, 2012 - 10:19 am တို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်မြေထဲမှာ ဘာသာမတူ၊လူမျိုးခြားတွေရဲ့ အနိုင်ကျင၊့်နှိပ်စက်၊စော်ကားမှုခံရတယ်၊ ဘာသာတရားပါစော်ကားခံရတယ်ဆိုတာ ရာဇ၀င်ရိုင်းပါတယ်။ အသဲကိုကျွဲခတ်ခံရသလို ခံစားရပါတယ်။ နေရာတကာမေတ္တာတရားထားဖို့ ရွှေပြည်အေးတရားဟောနေကြတဲ့ မြန်မာခေါင်းဆောင်တချို့ အခုလိုတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်။ အားလုံးဟာပုထုဇဉ်တွေပါ။ သူတို့ဒီလောက်ဆိုးနေမှတော့ ကိုယ်ဘက်ကဘာမှပြန်ကောင်းနေစရာမလိုဘူး။ တူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုပေးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူ အရင်းအချာတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ပြတဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုကျူးကျော်၊ယုတ်မာဆိုးသွမ်းနေကြတဲ့ ဘင်ဂါလီတွေနဲ့ ဒင်းတို့ကိုထောက်ပံ့နေသူအားလုံးကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချေမှုန်းပေးပါလို့အနုးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ စကားချပ်။ ။ အခုလိုတို့တိုင်းရင်းသားရခိုင်လူမျိူးတွေကို ကျုးကျော်စော်ကား နေတဲ့အခါကျတော့ ရန်ကုန်ဆူးလေနားက ဘလီမှာ ဆန္ဒပြတဲ့ကုလားတွေ ဘယ်ရောက်သွာပြီလဲ?။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့အော်ကြပါဦးလား!!!
Reply ပြည်သူ June 9, 2012 - 10:33 am “”မီးရှို့မှု၊ လက်ရောက်ကျူးလွန်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် မြို့ခံ ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်၂၀ ခန့် ဗိုလ်မှူးကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာသော်လည်း အကြမ်း ဖက် အဖွဲ့မှ ခဲများ၊ တုတ်များဖြင့် လိုက်လံပစ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် ချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ရကြောင်း မျက်မြင်များ၏ ပြောဆိုမှုအရ သိရသည်။”"
Reply Bo June 9, 2012 - 10:42 am This request letter was sent to the Muslims leaders. Dear all,
Reply Aung Aye June 9, 2012 - 11:01 am What is the Minister of Home Affair doing ? It is so late to take the action. Police battalions must send to save our nationals urgently.
Reply Soe Nyunt June 9, 2012 - 11:08 am Why don’t apologize the Yangon Muslim societies to Daw Aung San Su Kyi for those events?
Reply yakhine June 9, 2012 - 11:21 am ဇွန်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ၊ YPI
Reply yakhine June 9, 2012 - 11:23 am မိတ္ထီလာ လေတပ်လည်း အသင့်အနေအထား ပြင်ဆင်
Reply ဆရာမြ June 9, 2012 - 11:28 am “ရခိုင်မလေး တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်စာ””
Reply နတ်ဆိုး (Russia ) June 9, 2012 - 11:32 am ကဲ ပြည်သူတွေ ဖင်မနိုင်ပဲကြီးဟင်း စားချင်ကြတာ ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော် နဲ့ လောလောဆယ် မထိုက်တန်သေပါဘူး။ ဒါကြောင့် မို့ တပ်မတော်ကို အာဏာပြန်လွဲ ပေးသင့်နေပါပြီ။ တပ်မတော် အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလက မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဘယ်လောက် ငြိမ်းချမ်းသာယာ ၀ဖြိုးနေလဲ၊ အခုနိုင်ငံတော်မှာ ဒုစရိုက်မှုတွေ တိုးပွားနေတာကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့လဲ။ ဒါကြောင့်မို့ တပ်မတော်သာလျှင် အမိ တပ်မတော်သာလျှင် အဖပါ အားလုံး တပ်မတော်ကို သာ အာဏာပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြပါစို့။
Reply ရတနာဝင်းထိန် June 9, 2012 - 7:48 pm ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
Reply မိန်းမဆိုး June 10, 2012 - 10:59 pm နိုင်ငံတော်ကြီးသာယာဝဖြိုးနေတာသေချာလို့လား။တပ်မတော်အုပ်ချုပ်နေတုန်းကလေ။တို့သိတာတော့ ဆင်းရဲဒုက္ခဝေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပဲတွေ့ဘူးတယ်။ရှင်ပဲတပ်မတော်ကိုအုပ်ချုပ်တာခံချင်ရင်တပ်မတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အင်းစိန်ကိုသာ ဂိုးဗျို့။
Reply than June 28, 2012 - 12:25 am မျက်စိတစ်ဆုံးကြည့်သင့်၊မျက်တောင်မွှေးတစ်ဆုံးမကြည့်သင့်ပါ။
Reply soe soe June 9, 2012 - 12:20 pm အစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ ကစိတ်ပျက်စရာကောင်း တယ်။မောင်းတောမှာ၇ခိုင်တွေ ကိုယ်တိုင်းသားတွေ အသတ်ခံရ၊ ဆေးရုံတွေအထိ ဒက်ရာကြောင့်ဆေးကုနေရတဲ့လူတွေ ကိုတောင် လိုက်သတ် ခံရတာကို တော့ဘယ်သူကလုပ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိရဲ့နဲ့ ဖုန်းဖုန်းဖိဖိလုပ်နေတယ်။တောင်ကုပ်က ကုလား တွေ အသတ် ခံရတာတော့သွေးဆူးစေ မယ့်အရေးအသား တွေနဲ.မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်တယ်။ပြသနာတွေစလာကတည်းက အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲ နိုင် တဲ့နေရာတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ လုံခြုံရေးအစီ အမံ လုပ်ဖို့ ပျက် တာကြောင့် ဒါတွေ ဖြစ်လာရတာ။သူဒို့ တခြားပြသနာကို အာရုံလွဲ ဖို့ ရခိုင် တွေကိုစတေးတယ်။တိုင်းသားတွေကဘယ်လိုလုပ် သူတို့ ကိုယုံ မလဲ။ဒီလိုပုံနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဘယ်တော့ မှ မရဘူး။ကေ အိုင်အေ လိုမျိုးရခိုင်မှာရှိခဲ.ရင်
Reply ngwe thoung June 9, 2012 - 12:41 pm ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် အမိမြေကိုကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
Reply Pyaung Gyi June 9, 2012 - 12:44 pm လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဖြစ်စဉ်များကို အခွင့်ကောင်းယူ အမြတ်ထုတ်သွားမှာတော့ စိုးရိမ်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေကို အသုံးချပြီး ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င်နေထိုင်နေကြတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ တိုင်းရင်းသားလို့ မသတ်မှတ်ထားတဲ့ လူမျိုးတွေကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ မောင်းထုတ်သင့်ပါတယ်။
Reply Maung Maung June 9, 2012 - 1:19 pm ကျနော်ဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်မှာ ဘာသာပေါင်းစုံသူငယ်ချင်း တွေရှိပါတယ်။ ယခုပြသာနာဖြစ်ပွားနေသော ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမြို့အပါအ၀င် ပြသာနာမရှိသေးသော အခြားသောဆက်စပ်နေရာများလူများအားလုံး လူနည်းစု လူများစုလူများအားလုံး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအားလုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရှိစေချင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားသောနိုင်ငံဖြစ်၍ ဘာသာအားလုံး တည်ရှိပါသည်။ သို့သော် အဓိကအားဖြင့် ဗုဒ်ဓဘာသာကိုးကွယ်မှုများပြားသောတိုင်းပြည်ဖြစ်ပါ၍ ထိုရခိုင်ဒေသမှအပ ကျန်ဒေသဆီသို့ ကူးစက်ဖြစ်ပွားလာပါက မသက်ဆိုင်သူများ အပြစ်မရှိသူများ သက်ကြီးရွယ်အို မိန်းမ ကလေး စသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာပါက မရှောင်သာသော လူများ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ပြသာနာဖြစ်ပွားလိုသူများ ဒေါသရှာဖွေနေသူများ စီးပွားရေးမပြေလည်၍ အရာရာကို မကြည်လင်နေသူများကို ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းသင့်ပါသည်။ ထိုသူများသည် အဓိကပြသာနာဖန်တီးလှုံဆော်တတ်ပါသည်။မည်သူအတွက်မှမကောင်းသည့် ပြသာနာဖြစ်ပွားခြင်းကို လူတိုင်းရှောင်ဖယ်သင့်ပါသည်။ အမြန်ဆုံးတည်ငြိမ် အေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။
Reply blackslayer8888 June 9, 2012 - 1:23 pm တွေ့ပြီလားသူတို့အင်အားများရင်ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ…
Reply ကာကြီး June 9, 2012 - 2:14 pm အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ။
Reply ဗမာ June 9, 2012 - 4:09 pm အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြရတာပါ။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေကို ရန်လုပ်ပြီးစစ်တိုက်နေမဲ့အစား ဘင်ဂါလီမွတ်ဆလင် စစ်သွေးကြွတွေကို တိုက်ခိုက်၊ချေမှုန်းခြင်းကပိုပြီး အဓိပ်ပယ် ရှိပြီး သိက္ခာရှိပါတယ်။
Reply arrowmam June 9, 2012 - 6:46 pm မြင့်မြတ်တယ်စိတ်ထားနဲ့နေတာကိုစော်ကားလာရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မြန်မာ၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်းဆိုတယ်စည်းလုံးမှုရှိတယ်နိုင်ငံတခုအနေနဲ့တော့တွေတယ်လက်နက်နဲ့နှိုင်နင်မှာပါအခုလိုမင်မဲ့စရိုက်တွေလုပ်နေရင်တော့အဏာပိုင်အဖွဲ့စည်တွေကကြည်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီအမေဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်ကကြည်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးသီခံစိတ်ကိုစော်ကာလာရင်ကိုယ်ဘ၀ကိုတွေးရမှာပါအဲဒီအတွက်စိတ်ဓါတ်မကျဖိုပဲပြောချင်းပါတယ်
Reply beta June 9, 2012 - 8:33 pm သြော် နှစ်ပေါင်းများ မြန်မာ့ မြေပေါ်မှာ နေပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို စော်ကားနေတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတပါးသား တွေထဲမှာ ဒီမွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေက ပိုပြီး ဆိုးရွားစွာ နဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ် လို့ ပြောရမှာပါ၊
Reply Mr green June 10, 2012 - 11:05 am Ofcourse , Burmese organisation are not involve muslin people , that cause are we must show in the world. Voa , RFA , BBC , Mizzima all the media are why quite that , I would like to told that please show that correct and do that correct .
Reply မိန်းမဆိုး June 10, 2012 - 10:45 pm ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်မြေမှာနေ၊ကိုယ့်ရေကိုသောက်နေတဲ့ ဘာသာခြား မူဆလင်ကုလားတွေကိုသာမကဘဲ၊ ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကိုပါကြောက်နေရတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာပဲ ဖြစ်သင့်တဲ့စစ်တပ်က ဘယ်နှယ့်ရခိုင်တွေရဲစခန်းကိုဝိုင်းတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ကို လက်နက်ကိုင်ပြီးပစ်သတ်တယ်။ဘင်ဂါလီကုလားတွေ အဲလောက်ဆိုးရွားတာကျတော့ မိုးပေါ်ကိုထောင်ပြီးခြိမ်းခြောက်ရုံလေးပစ်တယ်။တကယ်ဆို စစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီး ဒီကုလားတွေကိုရှေ့ကနေတိုက်ထုတ်ပေးရမှာပါ။စစ်တပ်ကြီးရေဘယ်တော့များမှ ပြည်သူတွေအားကိုးရတဲ့ စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာလဲ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ပြောရမှာအားနာပါတယ်။ ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကြိုးစားကြဘာလို့။
Reply hlaing June 12, 2012 - 8:45 pm good
Reply နန်ကသု June 12, 2012 - 5:46 pm အားလုံးဟာ ကံ ကံ၏အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဖြစ်နေကြတာပါ.. အားလုံး မေတ္တာတရားထားနိုင်ကြပါစေ….
Reply white June 12, 2012 - 8:31 pm မှားတယ်
Reply theinaye August 18, 2012 - 3:45 pm အပေါ်မှာ လူအပေါင်း အားချောင်ကောင်း မင်းတို့တွေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးပြီးပြီးလဲ